Ch2लूका – 2माछा
घर / बाइबल / लूका को सुसमाचार / Ch2लूका
2:1 र यो एक उर्दी सिजर अगस्तस देखि बाहिर गए ती दिनमा भयो, सारा संसार भर्ना हुन भनेर त.
2:2 यो पहिलो नामांकन थियो; यसलाई सिरिया शासक द्वारा गरिएको थियो, Quirinius.
2:3 र सबै घोषणा गर्न गए, आफ्नै शहर प्रत्येक एक.
2:4 त्यसपछि यूसुफले पनि गालील देखि जानुभयो, नासरत शहर देखि, यहूदियामा मा, दाऊदको शहरमा, जो बेतलेहेममा भनिन्छ, उहाँले दाऊदको घर र परिवारको थियो,
2:5 क्रममा घोषणा गर्न, मरियम आफ्नो espoused पत्नी संग, जो बच्चा थियो.
2:6 त्यसपछि यो कि भयो, तिनीहरूले थिए जबकि, दिन पूरा थिए, त्यसैले त्यो जन्म दिन भनेर.
2:7 र त्यो उनको जेठो छोरा निस्कने ल्याए. र त्यो swaddling लुगा उहाँलाई राख्यो र एक Manger उहाँलाई राखे, किनभने त्यहाँ Inn तिनीहरूलाई लागि कुनै कोठा थियो.
2:8 र एउटै क्षेत्रमा गोठालाहरूले थिए, सचेत रहेको र आफ्नो बगालको भन्दा रात हेर्ने राखन.
2:9 अनि हेर, प्रभुको एउटा दूत तिनीहरूलाई नजिकै उभिए, र परमेश्वरको चमक तिनीहरूलाई वरिपरि shone, र तिनीहरूले एउटा ठूलो डर संग प्रहार गरेका थिए.
2:10 र दूतलाई तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "नडराऊ. लागि, हेर, म तपाईंलाई एउटा ठूलो आनन्द घोषणा, जसले सबै मानिसहरूको लागि हुनेछ.
2:11 दाऊदको शहर मा तपाईं को लागि आज को लागि एक मुक्तिदाता जन्म गरिएको छ: उहाँले ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ.
2:12 र यो तपाईं को लागि एक चिन्ह हुनेछ: तपाईं शिशु swaddling लुगा मा र्याप र एक Manger झूट पाउनुहुनेछ। "
2:13 र अचानक त्यहाँ आकाशीय सेना को एक भीड दूतलाई थियो, परमेश्वरको प्रशंसा र भन्दै,
2:14 "उच्चतम परमेश्वरको महिमा, र पृथ्वी शान्ति मा राम्रो इच्छा को मानिसहरूलाई। "
2:15 र यो पनि त्यस्तै भयो, स्वर्गदूतहरू स्वर्गमा तिनीहरूलाई देखि प्रस्थान गरेको थियो जब, गोठालाहरू एक अर्को भन्नुभयो, "हामीलाई बेतलेहेममा गर्न भन्दा पार गरौं र यो शब्द हेर्न, जो भएको छ, जो प्रभु हामीलाई प्रकट गरेको छ। "
2:16 र तिनीहरूले चाँडै गए. र तिनीहरूले मरियम र यूसुफ फेला; र शिशु एक Manger झूट थियो.
2:17 त्यसपछि, यो देखेर मा, तिनीहरूले यो केटा तिनीहरूलाई बोली गरिएको थियो कि शब्द बुझे.
2:18 र यो सुने सबै यस द्वारा चकित थिए, र गोठालाहरूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो थिए ती कुराहरू द्वारा.
2:19 तर मरियम यी सबै शब्द राखिएको, उनको मन तिनीहरूलाई pondering.
2:20 र गोठालाहरू फर्के, महिमा र तिनीहरूले सुने र देखेका थिए सबै कुराहरू परमेश्वरको प्रशंसा, यो तिनीहरूलाई भन्नुभयो थियो जस्तै.
2:21 र पछि आठ दिन समाप्त थिए, केटा खतना हुनेछ भनेर, आफ्नो नाम भनिन्थ्यो येशू, उहाँले दूतलाई द्वारा भनिन्थ्यो जस्तै गर्भमा गर्भधारण अघि.
2:22 र पछि उनको शुद्धीकरण को दिन पूरा थिए, मोशाको व्यवस्था अनुसार, तिनीहरूले यरूशलेममा ल्याए, प्रभु उसलाई प्रस्तुत गर्न,
2:23 यसलाई प्रभुको व्यवस्थामा लेखिएको छ जस्तै, "गर्भमा खोल्ने हरेक पुरुष लागि प्रभु पवित्र भनिनेछ,"
2:24 र आदेश बलिदान प्रदान गर्न, प्रभुको व्यवस्थामा भने के अनुसार, "Turtledoves वा दुई जवान परेवा को एक जोडी।"
2:25 अनि हेर, त्यहाँ यरूशलेममा एक मानिस थिए, जसको नाम शिमोन थियो, र यो मानिसको बस थियो र परमेश्वरको भय राख्ने, इस्राएलका सान्त्वना प्रतीक्षा. र पवित्र आत्मा उहाँलाई थियो.
2:26 र उहाँले पवित्र आत्मा देखि जवाफ पाएका थिए: उहाँले प्रभुको ख्रीष्टको देखेका थिए अघि उहाँले आफ्नै मृत्यु हेर्न भनेर.
2:27 र उहाँले मन्दिरमा आत्मा संग गए. र येशूले बच्चा आफ्नो आमाबाबुको मा ल्याए थियो, क्रममा व्यवस्थाको अनुकूल अनुसार आफ्नो तर्फबाट कदम चाल्न,
2:28 उहाँले पनि तिनलाई उठाए, आफ्नो काखमा मा, र तिनले परमेश्वरको आशिष् र भन्नुभयो:
2:29 "अब तिमी शान्ति तपाईंको सेवक खारेज हुन सक्छ, हे प्रभु, तपाईंको शब्द अनुसार.
2:30 मेरो आँखा को लागि आफ्नो मुक्तिको देखेको छु,
2:31 जो तपाईं सबै मानिसहरूका को अनुहार अघि तयार छन्:
2:32 राष्ट्रहरूले र आफ्नो मान्छे इस्राएलका महिमा गर्न प्रकाश ज्योति। "
2:33 र आफ्नो बाबु र आमा यी कुराहरू भन्दा सोच थियो, जो उहाँको बारेमा बोलेको थिए.
2:34 र शिमोन तिनीहरूलाई आशिष्, र उहाँले आफ्नो आमा मरियमलाई यसो भने: "हेर, यो एक खण्डहर र इस्राएलमा धेरै को पुनरुत्थानको लागि सेट गरिएको छ, र चिन्ह रूपमा जो contradicted गरिनेछ.
2:35 र एक तरवार आफ्नो आफ्नै प्राण पास हुनेछ, यति धेरै हृदय विचार प्रकट गर्ने हुन सक्छ। "
2:36 र त्यहाँ भविष्यवक्ता भनेर थियो, अन्ना, Phanuel एक छोरी, आशेर कुलका देखि. त्यो धेरै वर्ष मा उन्नत थियो, र त्यो उनको virginity देखि सात वर्षसम्म श्रीमान्सँगै बस्ने थियो.
2:37 त्यसपछि त्यो एक विधवा थियो, पनि उनको असी चौथो वर्ष. र मन्दिर देखि बिना प्रस्थान, त्यो उपवास र प्रार्थना गर्न एक सेवक थिए, रात र दिन.
2:38 र एउटै घण्टा मा प्रवेश, त्यो प्रभुको स्वीकार. र त्यो गर्ने इस्राएलका छुटकारा प्रतीक्षा थिए सबै उसलाई बताउनुभयो.
2:39 र तिनीहरू सबै कुराहरू प्रदर्शन थियो पछि प्रभुको व्यवस्था अनुसार, तिनीहरूले गालील फर्के, आफ्नो शहर, नासरत.
2:40 अब बच्चा भयो, र उहाँले बुद्धि पूर्णतामा संग बलियो भयो. र परमेश्वरको अनुग्रहको उहाँमा थियो.
2:44 तर, supposing that he was in the company, they wentaday’s journey, seeking him among their relatives and acquaintances.
2:46 र यो पनि त्यस्तै भयो, after three days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, listening to them and questioning them.
2:48 र मा उहाँलाई देखेर, तिनीहरूले छक्क परे. र आफ्नो आमा उहाँलाई भने: "छोरा, why have you acted this way toward us? हेर, your father and I were seeking you in sorrow.”
2:49 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “How is it that you were seeking me? For did you not know that it is necessary for me to be in these things which are of my Father?"